Tag: garaji bhandi | Martech Zone
Tag: garaji bhandi
Muvhuro, October 31, 2016 Douglas Karr
Isu takavaka inoshamisa podcast studio muIndianapolis ine state-of-the-art dijitari masanganiswa uye studio yemhando mamaikorofoni. Ini handisi kumhanya chero yakakosha software, zvakadaro. Ini ndinongounza iyo yekusanganisa inoburitsa yakananga muGarageband kwandinorekodha yega yega mic yekuisa kune yakazvimirira track. Asi, kunyangwe neyangu musanganiswa unoburitswa kuburikidza neUSB yakakwidziridzwa, odhiyo yacho haingouya nemhando yakanaka. Uye mukati meGarage bhandi ndinogona kuwedzera mavhoriyamu enzira imwe neimwe, asi ipapo ini handidi
Maitiro Ekunyora Podcast Kubvunzana paSkype
Mugovera, Chivabvu 23, 2015 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Isu tave nemaviri edu eExpert Kubvunzana akateedzana pane yedu Podcast uye yaenda zvisingaite mushe. Isu tatova neEdge yeWebhu Radio inova yakabudirira uye yakaitwa mukubatana nevamwe vedu kuSite Strategics. Dzimwe nguva, zvakadaro, isu taida kutora yekudzika yakadzika chaizvo nehunyanzvi nepo EdgeTalk ichitarisa pamusoro wenyaya. Nenyanzvi munyika dzese, zvinoita zvisingaite kuyera purogiramu yemunhu wese kuti apinde